ကပ်ဆေးခြင်းဘေး မှ လွတ်ကင်းဖို့ နေ့စဉ်ရွတ်ပါလေ.. တန်ခိုးကြီးမားသော “အဋ္ဌာန မေတံ” ဂါထာတော် ကို ဝေမျှလိုက်ပါတယ် .. – Na Pann San
Na Pann San W | April 8, 2020 | Knowledge | No Comments
ကပ်ဆေးခြင်းဘေး မှ လွတ်ကင်းကြစေရန် “ အဋ္ဌာနမေတံ ” ဂါထာတော် ရွတ်ပါ ….
ဗုဒ္ဓမြတ်စွာ ဘုရားရှင် ကို အရှင်ဒေဝဒတ် ကျောက်မောင်းဆင်၍လုပ်ကြံပြီးကာစ ပုထုဇဉ်ရဟန်းတော်တို့က ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်အတွက်စိုးရိမ်ကြသဖြင့် တုတ် တောင်ဝှေး စသည်တို့ဖြင့် ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို အကာအကွယ်ပေးရန် စုဝေးရောက်ရှိလာကြရာ ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်က ကာကွယ်ပေးရန်မလိုကြောင်း ရှင်းလင်းမိန့်ကြားတော်မူရာတွင်တစ်ကြိမ်။
နောက်နေ့မြို့တွင်းသို့ဆွမ်းခံကြွမည့်အချိန် နာဠာဂီရိ ဆင်ဆိုးကြီးကို အရက်တိုက်ပြီး ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကို လုပ်ကြံမည်ဖြစ်ကြောင်း သိရှိတော်မူသဖြင့် ညီတော်အရှင်အာနန္ဒာက ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်၏ရှေ့မှ ကြွသွားပြီး ဘုရားရှင် ကို အကာ အကွယ်ပြုမည် ကို မလိုအပ်ကြောင်း အရှင် အာနန္ဒာအား မိန့်ကြားတော်မူရာ တွင် တစ်ကြိမ် ။
“ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ ၏ သဘာဝ မည်သူကမျှ မည်သို့မျှ ဘုရားရှင်တို့၏ အသက်ကိုလုပ်ကြံသတ်ဖြတ်၍ မရကြောင်း ဘုရားရှင်တို့သည် အချိန်တန်မှသာ မိမိတို့အလိုလိုသာ ပရိနိဗ္ဗာန်ပြုကြရမြဲဖြစ်ကြောင်း”
UBA ခေတ် က ရှမ်းပြည်တစ်နေရာတွင် တောင်စောင်းနှင့်တိုက်မိပြီးလေယာဉ်ပျက်ကျရာ အပွန်းအပဲ့ရာပင်မရှိ အသက်ရှင် ကျန်ခဲ့သူ၏ အင်္ကျီအိတ်အတွင်း၌လည်း အဋ္ဌာနမေတံဂါထာတော် ရေးထားသည့် စာရွက်ကိုတွေ့ရသည်ဟုဆို၏ ထိုသူတစ် ဦးထည်းသာ ထြူုခားစွာ အသက်ရှင်ကျန်ခဲ့၏။
မိမိ ၏ အိတ် ဦးထုပ် စသည်တို့၌ ရိုသေစွာ(ရိုသေစွာ) ဆောင်ထားခြင်း စသဖြင့် မိမိတို့ဉာဏ် ရှိသလို အကာအကွယ်ယူ ထားနိုင်ပါကြောင်း။
ထိုသို့ ဂါထာတော်၏ အကာအကွယ်ကို ရိုသေ ယုံကြည်စွာယူထားခြင်းဖြင့် (ဝဋ်ကြွေးမှ မရှိလျှင်)လုံးဝ အန္တရာယ်ကင်းပါကြောင်း သူတော်ကောင်းတို့ခင်ဗျား။
(ကျွန်ပ် ကိုယ်တိုင်-“အဋ္ဌာန မေတံ”ဂါထာ တော်၏ တန်ခိးု့တော်ကြောင့် အသက်အန္တရာယ်မှ လွတ်မြောက်ခဲ့ရပုံကို သူရဇ္ဇမဂ္ဂဇင်းတွင် ၂၀၀၅ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ် ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တစ်ကြိမ် နှစ်ကြိမ်တိုင် ကိုယ်တွေ့အဖြစ်မှန်ဝတ္ထုတိုများအဖြစ်ရေးသားခဲ့ပါ၏။)
နေ့စဉ်မပြတ် ရွတ်ဖတ် သရဇ္ဈာယ်တော် မူကြပါ သူတော်ကောင်းတို့။
ကပျဆေးခွငျးဘေး မှ လှတျကငျးကွစရေနျ “ အဋ်ဌာနမတေံ ” ဂါထာတျော ရှတျပါ ….
ဗုဒ်ဓမွတျစှာ ဘုရားရှငျ ကို အရှငျဒဝေဒတျ ကြောကျမောငျးဆငျ၍လုပျကွံပွီးကာစ ပုထုဇဉျရဟနျးတျောတို့က ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျအတှကျစိုးရိမျကွသဖွငျ့ တုတျ တောငျဝှေး စသညျတို့ဖွငျ့ ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျကို အကာအကှယျပေးရနျ စုဝေးရောကျရှိလာကွရာ ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျက ကာကှယျပေးရနျမလိုကွောငျး ရှငျးလငျးမိနျ့ကွားတျောမူရာတှငျတဈကွိမျ။
နောကျနမွေို့တှငျးသို့ဆှမျးခံကွှမညျ့အခြိနျ နာဠာဂီရိ ဆငျဆိုးကွီးကို အရကျတိုကျပွီး ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျကို လုပျကွံမညျဖွဈကွောငျး သိရှိတျောမူသဖွငျ့ ညီတျောအရှငျအာနန်ဒာက ဗုဒ်ဓဘုရားရှငျ၏ရှမှေ့ ကွှသှားပွီး ဘုရားရှငျ ကို အကာ အကှယျပွုမညျ ကို မလိုအပျကွောငျး အရှငျ အာနန်ဒာအား မိနျ့ကွားတျောမူရာ တှငျ တဈကွိမျ ။
“ဗုဒ်ဓမွတျစှာဘုရားရှငျတို့ ၏ သဘာဝ မညျသူကမြှ မညျသို့မြှ ဘုရားရှငျတို့၏ အသကျကိုလုပျကွံသတျဖွတျ၍ မရကွောငျး ဘုရားရှငျတို့သညျ အခြိနျတနျမှသာ မိမိတို့အလိုလိုသာ ပရိနိဗ်ဗာနျပွုကွရမွဲဖွဈကွောငျး”
UBA ခတျေ က ရှမျးပွညျတဈနရောတှငျ တောငျစောငျးနှငျ့တိုကျမိပွီးလယောဉျပကျြကရြာ အပှနျးအပဲ့ရာပငျမရှိ အသကျရှငျ ကနျြခဲ့သူ၏ အကငြ်္ီအိတျအတှငျး၌လညျး အဋ်ဌာနမတေံဂါထာတျော ရေးထားသညျ့ စာရှကျကိုတှရေ့သညျဟုဆို၏ ထိုသူတဈ ဦးထညျးသာ ထွူုခားစှာ အသကျရှငျကနျြခဲ့၏။
မညျသို့ဆိုစေ “အဋ်ဌာန မတေံ”ဂါထာတျော ကိုနစေ့ဉျရှတျဖတျသရဇ်ဈာယျခွငျး၊ ပုဒျ ပါဒျအက်ခရာ မှနျကနျစှာရေးသား၍အိမျ၏ ဘုရားကြောငျးဆောငျ အိမျ၏ လေးဘကျလေးတနျ အိမျဝငျပေါကျ အပျေါ စသညျတုိ့၌ရိုသစှော ကပျထားခွငျး။
မိမိ ၏ အိတျ ဦးထုပျ စသညျတို့၌ ရိုသစှော(ရိုသစှော) ဆောငျထားခွငျး စသဖွငျ့ မိမိတို့ဉာဏျ ရှိသလို အကာအကှယျယူ ထားနိုငျပါကွောငျး။
(ကြှနျပျ ကိုယျတိုငျ-“အဋ်ဌာန မတေံ”ဂါထာ တျော၏ တနျခိးု့တျောကွောငျ့ အသကျအန်တရာယျမှ လှတျမွောကျခဲ့ရပုံကို သူရဇ်ဇမဂ်ဂဇငျးတှငျ ၂၀၀၅ ခုနှဈက တဈကွိမျ ၂၀၀၈ ခုနှဈက တဈကွိမျ နှဈကွိမျတိုငျ ကိုယျတှအေ့ဖွဈမှနျဝတ်ထုတိုမြားအဖွဈရေးသားခဲ့ပါ၏။)
နစေ့ဉျမပွတျ ရှတျဖတျ သရဇ်ဈာယျတျော မူကွပါ သူတျောကောငျးတို့။